China delta p oksizenina fanaovana milina orinasa sy ny mpanamboatra | Sihope
milina fanaovana oksizenina delta p
Manamboatra orinasa oksizenina PSA mampiasa ny teknolojia PSA (Pressure Swing Adsorption) farany izahay. Amin'ny maha-mpitarika oksizenina PSA azy, ny teny filamatra dia ny manolotra milina oksizenina ho an'ny mpanjifanay izay mifanaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena nefa tena lafo vidy. Mampiasa fitaovana tsara kalitao novidina avy amin'ny mpamatsy tsara indrindra amin'ny indostria izahay. Ny oksizenina vokarina ao amin'ny mpamokatra oksizenina PSA dia mahafeno ny fepetra takian'ny indostria sy ny fampiharana ara-pitsaboana. Orinasa maro manerana an'izao tontolo izao no mampiasa ozinina oksizenina PSA ary mamokatra oksizenina eny an-toerana mba hampandehanana ny asany.
Ampiasaina any amin'ny hopitaly ihany koa ny mpamokatra oksizeninay satria ny fametrahana ny mpamokatra entona oksizenina eny an-toerana dia manampy ny hopitaly hamokatra oksizenina manokana ary hampitsahatra ny fiankinan-dry zareo amin'ny cylinder oksizenina novidina eny an-tsena. Miaraka amin'ny mpamokatra oksizeninay, afaka mahazo famatsiana oksizenina tsy tapaka ny indostria sy ny toeram-pitsaboana. Ny orinasanay dia mampiasa teknolojia avo lenta amin'ny fanamboarana ny milina oksizenina.
Fizotry ny rafitra
Ny rafitra iray manontolo dia ahitana ireto singa manaraka ireto: singa fanadiovana rivotra voapoizina, tankina fitehirizana rivotra, fitaovana fanasarahana oksizenina sy azota, tanky buffer oksizenina.
1, singa fanadiovana rivotra voaporitra
Ny rivotra voatsindry omen'ny compressor rivotra dia ampidirina voalohany ao amin'ny fivoriambe fanadiovana rivotra. Ny rivotra voatsindry dia esorina amin'ny alàlan'ny sivana fantsona mba hanesorana ny ankamaroan'ny menaka, rano ary vovoka, ary avy eo dia esorina amin'ny fanamainana mangatsiaka mba hanesorana rano, sivana tsara hanesorana menaka sy vovoka. Ary ny fanadiovana lalina dia tanterahan'ny sivana ultra-fine avy hatrany. Araka ny fepetra fiasan'ny rafitra, ny orinasa Chen Rui dia nanamboatra andian-drivotra voaporitra manokana mba hisorohana ny mety hidiran'ny solika, manome fiarovana tsara ho an'ny sivana molekiola. Ny singa fanadiovana rivotra voalamina tsara dia miantoka ny fiainan'ny sivana molekiola. Ny rivotra madio tsaboina amin'ity singa ity dia azo ampiasaina amin'ny rivotra fitaovana.
2, tanky fitehirizana rivotra
Ny anjara asan'ny tanky fitehirizana rivotra dia ny fampihenana ny fikorianan'ny rivotra ary miasa toy ny buffer; Ny fiovaovan'ny tsindry amin'ny rafitra dia mihena, ary ny rivotra voatsindry dia voadio tsara amin'ny alàlan'ny fivorian'ny rivotra voapoizina mba hanesorana tanteraka ny loton'ny solika sy ny rano ary hampihenana ny enta-mavesatry ny PSA manaraka ny oksizenina sy ny fitaovana fisarahana azota. Amin'izay fotoana izay ihany koa, rehefa mihodina ny tilikambo adsorption, dia manome ny fitaovana fanasarahana oksizenina PSA amin'ny fitaovana fanasarahana ny oksizenina PSA miaraka amin'ny rivotra voaporitra ilaina mandritra ny fotoana fohy mba hampitombo haingana ny tsindry, ka miakatra haingana ny tsindry ao amin'ny tilikambo adsorption. amin'ny fanerena miasa, miantoka ny fiasan'ny fitaovana azo antoka sy maharitra.
3, oksizenina azota fisarahana fitaovana
Misy tilikambo adsorption A sy B roa misy sivana molekiola voatokana. Rehefa miditra amin'ny fidirana ao amin'ny Tilikambo A ny rivotra madio voatsindry ary mikoriana amin'ny sivana molekiola mankany amin'ny fivoahana, ny N2 dia voatsindry azy, ary ny oksizenina vokatra dia mikoriana avy amin'ny fivoahan'ny tilikambo adsorption. Rehefa afaka fotoana fohy, dia feno ny sivana molekiola ao amin'ny tilikambo A. Amin'izao fotoana izao, ny Tower A dia manakana ho azy ny adsorption, mikoriana mankany amin'ny Tower B ny rivotra voatsindry mba hidiran'ny azota hamokatra oksizenina, ary ny fanavaozana ny sivana molekiola Tower A. Ny fanavaozana ny sivana molekiola dia tratra amin'ny alàlan'ny fampihenana haingana ny tilikambo adsorption amin'ny tsindry amin'ny atmosfera mba hanesorana ny azota adsorbed. Ny tilikambo roa dia mifandimby ho an'ny adsorption sy fanavaozana, fanasarahana oksizenina sy azota ary tsy tapaka ny oksizenina. Ireo dingana etsy ambony dia fehezin'ny programmable program controllers (PLCs). Rehefa napetraka ny fahadiovan'ny oksizenina amin'ny faran'ny setroka, ny programa PLC dia miasa mba hanala ny valva ho azy ary hanaisotra ny oksizenina tsy manara-penitra mba hahazoana antoka fa tsy mikoriana mankany amin'ny teboka entona ny oksizenina tsy mendrika. Rehefa mivoaka ny entona dia latsaky ny 75 dBA ny tabataba amin'ny alalan'ny silencer.
4, oksizenina buffer tank
Ny fiara mifono vy oksizenina dia ampiasaina mba handanjalanjana ny tsindry sy ny fahadiovan'ny oksizenina misaraka amin'ny rafitra fanasarahana oksizenina azota mba hiantohana ny famatsiana tsy tapaka ny oksizenina. Amin'izay fotoana izay ihany koa, aorian'ny famadihana ny tilikambo adsorption, dia hamerina ny entona misy azy ao amin'ny tilikambo adsorption izy. Amin'ny lafiny iray dia hanampy ny tilikambo adsorption hampitombo ny tsindry, ary handray anjara amin'ny fiarovana ny sosona fandriana. Handray anjara lehibe amin'ny fizotran'ny fiasan'ny fitaovana izany.
teo aloha: ozinina fitsaboana oksizenina ao anaty container
Manaraka: Heatless Purge Desiccant Compressor Air Dryer
Ozinina famokarana oksizenina ara-pitsaboana Psa Oxygen Gene...